Waxaa laga yaabaa inaan ku haysanno barnaamij "Mind" cusub oo ku jira watchOS 8 | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay isku diyaarineysaa inay soo bandhigto seddex codsi oo cusub oo saacad ah oo qayb ka ah watchOS 8, sida lagu go'aamiyey fariinta ay soo dhigtay Khaos Tian on Twitter. Codsi ah Magaca Maskaxda, malaha barnaamij cusub oo lagu maareeyo caafimaadkaaga maskaxda,. Mid kale oo ka socda Xiriirrada iyo ugu dambeyn mid ka mid ah Golayaasha ayaa ka soo muuqan kara dhowr saacadood WWDC maanta.
Xanta ayaa marba marka ka dambeysa ka soo baxeysa waxa aan ku arki karno WWDC galabta. Markan wuxuu si maldahan u sheegayaa codsiyada cusub ee laga yaabo in laga dhex bilaabi karo watchOS 8, nidaamka cusub ee hawlgalka ee loogu talagalay Apple Watch. Waxa ugu cajaa'ibka badan waa arjiga loo yaqaan "Maskax" oo laga yaabo inuu u yimaado si loo xaqiijiyo wararka xanta ah ee jira ee Apple ku soo bandhigi lahaa codsi caafimaad oo cusub laakiin markan, caafimaadka maskaxda.
Markii ugu horreysay ee la ogaado codsiyadan cusub ayaa ahaa horumariyaha Khaos Tian, kaas oo lagu daabacay Twitter. Sawir muujinaya astaanta App Store ayaa liis garaynaysa dhowr aqoonsi oo xirmo, oo inta badan lala xiriirinayo watchOS. Liiska waxaa ka mid ah waxyaabo yar oo laga yaabo inay tilmaamaan waxa ku soo socda Apple Watch si dhakhso leh.
Raadinta muhiimka ah ee liiska waa "com.apple.Mind", taas oo ah mid cusub oo cusub maadaama aysan jirin barnaamijyo Apple ah oo cinwaankoodu xambaarsan yahay. Waa macquul in Maskaxdu ay noqon karto barnaamij cusub oo lagu soo daray watchOS 8, kaas oo bixin kara nooc ka mid ah shaqooyinka la xiriira caafimaadka maskaxda. Waxyaabo kale oo badan oo muuqaalka laga soo qaaday waxaa ka mid ah "NanoTips" iyo "NanoContacts," oo tilmaami kara noocyada kala duwan ee Apple Watch ee barnaamijyada iPhone ee jira. Tani waxay qayb ka noqon kartaa riixitaanka socda si Apple Watch looga dhigo mid aan ku tiirsaneyn barnaamijyada iPhone iyo IOS ee maareynta iyo maaraynta xogta ayaga oo matalaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Waxaa laga yaabaa inaan ku haysanno barnaamij "Mind" cusub oo ku jira watchOS 8
Filim duubista waxay ku egtahay xilli labo Ted Lasso ah ka hor tababarkiisa bisha soo socota